जित्नेको ज्यादति हुने हो र लोकतन्त्रमा ? « janaaastha.com
जित्नेको ज्यादति हुने हो र लोकतन्त्रमा ?
प्रकाशित मिति : ३१ चैत्र २०७७, मंगलवार १२:००
एमाले पार्टी र त्यसका अध्यक्ष कमरेडलाई यो अवसर भनेको ‘विण्ड फल नै हो । करिब दुई तिहाइ बराबरको जित हासिल गरी सरकार बनाउने, त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको ! यस्तो अवसर त भाग्यमानीलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण यो विण्ड फल हो ।
‘प्रचण्डजी, हामी दुई अध्यक्ष भएकाले कार्यक्षेत्र बाँडौं । तपाईं पार्टी चुस्त तरिकाले र निर्धक्कसाथ चलाउनुस् । सबैलाई समेटेर, कसैलाई काखा र पाखा नगरी एउटा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जसरी चलाउनुपर्ने हो ठीक त्यसैगरी चलाउनुस् । म पनि जनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखी पार्टीले अघि सारेका एजेण्डालाई आधार बनाएर पार्टीकै निर्देशनमा काम गर्छु । देशलाई समृद्ध बनाउने हो । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने काममा एक भएर लाग्नुपर्छ ।’
यिनलाई यति भन्दै जिम्मेवारी दिएको भए र माधव, झलनाथ, वामदेव कमरेडहरूलाई साथमा राखेर ल भन्नुहोस् अब को–को कमरेडलाई कुन–कुन मन्त्रालय जिम्मा दिने ? अख्तियारमा कसलाई लाने, निर्वाचन आयोगमा को ठीक होला ? यसरी सल्लाह गरेर काम गरेको भए नेपालको स्वरूप बदलिन शुरु भइसकेको हुने थियो यो साढे ३ वर्षको अवधिमा । तर, यस्तो भएन । अख्तियारमा मेरै, मन्त्री मेरै, निर्वाचन आयोगमा मेरै, राजदूत पनि मेरै, जताततै मेरै चाहिन्छ भन्दा कुरा बिग्रियो । हिन्दीमा एउटा शायरी छ–
‘जब कुर्सी मिली तो क्या से क्या हो गए वो,
खुद अपनि नजर में खुदा हो गए वो । ‘
ठ्याक्कै यस्तै भयो । कसैलाई नगन्ने र नटेर्ने ।
गरिबका निम्ति ठिक्कैका आवास निर्माण गरी बाँड्ने काम गर्न सकिन्थ्यो । तराईमा नहर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनियमितताले लागत बढिरहेका तर पूरा नभइरहेका गौरव लाग्ने परियोजना पूरा गर्न सकिन्थ्यो । बन्द भएका उद्योग, कलकारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । बिचौलिया हटाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । मल सस्तो बनाउन सकिन्थ्यो । देशमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । कोरोना कालमा जनतालाई राहत बाँडेर मन जित्न सकिन्थ्यो । यस्तो गरेको भए प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत उचाइ कति बढ्दो हो, कम्युनिष्ट पार्टीको उचाइ कति बढ्दो हो ? ३० वर्षमा पूरा भएको योजनाको धाराको टुटी खोलेर पानी झार्दा त खुशीले गद्गद् भएर आशीर्वाद दिने जनताले के मात्रै नगर्दा हुन् प्रमलाई चुच्चे रेल र पानीजहाजको नक्सा देख्दा रेल चढेको ठान्ने, प्रशान्त महासागरमा जहाज चलेको मान्ने जनताले यस्तो गरेको भए कति तारिफ गर्थे होलान् ।
‘बा’ मात्रै होइन बा पनि तिमी नै, आमा पनि तिमी नै, साथी पनि तिमी नै भन्ने थिए । यस्तो असाधारण अवसरलाई सदुपयोग गरेर इतिहास निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरबाट चुक्नुभयो । देवकोटाले लेखेको कविता ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ भन्ने मार्गमा चल्नुभयो । यसले न प्रधानमन्त्रीको भाग्य फुटायो, बरु सारा नेपालीको भाग्य फुटाइदियो । अरूणा लामाको गीतको एक पंक्ति यस्तो छ ..‘भाग्य फुटे सिउँथें बरु मनै फाटे केले सिउने हो …! कर्मले नै भाग्य बनाउने र फुटाल्ने हो । मिल्ने र सहिमार्ग लिने हो भने भाग्य सिउनमात्रै होइन कि चम्काउन सकिन्छ । जागृत हुन प¥यो, बस् ।
कुनै पनि हितकारी काम गर्नबाट प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सक्ने तागत, कुनै शक्तिमा थिएन, अझैसम्म पनि छैन यदि मिलेर फेरिबाट काम थाल्ने हो भने । मौका अझै छ गर्ने हो भने । कस्तुरीले आफँैबाट निस्केको सुवाष थाहा नपाएर अन्त खोज्दै हिँड्छ भन्छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री आफूले जनताको मतद्वारा हासिल गरेको अपार शक्तिलाई नचिनेर अन्यत्र भौंतारिँदै हुनुहुन्छ । यो बडो दुःखलाग्दो कुरा छ । अर्को कुरा पनि भनौं, इतिहास अरूले लेख्ने हो । आफूले त बनाउने मात्रै हो । इतिहास राजनीतिमा बलमिच्याइँ गरेजसरी हप्काएर, दप्काएर, धम्क्याएर, लोभ्याएर लेखाउन सकिन्न । शक्तिको बलमा इतिहास लेख्न सम्भव हुन्न । इतिहासको सोझ्याई सहन नसकिने हुन्छ । सबैले ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ ।
हुन त हामीले लडेर ल्याएको हो आजको लोकतन्त्र तर यो लोकतन्त्रजस्तो भने छैन । लोकतन्त्र त विधिविधानले चल्छ, सहमति र सल्लाहबाट चल्छ । यो आवरणमा मात्रै सीमित भएको छ । ‘विनर टेक्स् अल’ त लोकतन्त्र होइन । मैले जितेको हुुँ, त्यसकारण मैैैले भनेको हुनुपर्छ, म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्नेजस्तो छ । यस्तो ‘विनर टेक्स् अल’ त कि तानाशाहीमा हुन्छ कि अधिनायकवादमा । लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । संसद्मा विपक्षी दलहरू हुन् अथवा पार्टीभित्रका अल्पमतवाला हुन्, यी दुवैको आ–आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका छ । लोकतन्त्र यिनीबिना चल्दैन । यिनीहरूको महत्व त्यहाँ यिनका सदस्यको उपस्थितिको संख्याले नभएर भूमिकाले तय गरेको हुन्छ । तर, यहाँ त, चाहे त्यो अन्य दलमा होस् अथवा एमाले स्वयंमा, जित्नेको बाहेक अरूको हैसियतसमेत अस्वीकार्यजस्तै छ । यो सत्य हो तर यो सत्यलाई जान्न चाहिरहेका छैनन् । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, जसको नेपाली अनुवाद यस्तो छ– सत्य थाहा नपाउनु ठूलो कुरा होइन तर थाहा पाउने चेष्टा नगर्नु भनेको अशिक्षित हुनु हो, विचाररहित रहनु हो । अरिँगाल प्रवृत्ति देख्दा त हो कि झैं लाग्ने ! नेतृत्वको राजनीतिक वस्त्र अरिँगालले धुजाधुजा पारेका छन् ।
समयमा नखाएको दबाई पनि विषबराबर हो भन्छन् हाम्रोतिर । एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो, अरू धेरै रोगसहित सुगरको पनि रोगी । जे नखान भन्यो त्यही खान खोज्ने । गुलिया जे छन् त्यही खाइदिने लुकिलुकी । दबाई दियो खाएजस्तो गर्ने तर नखाइदिने । आफ्नै कारणले रोगसँग लड्न नसकेर परलोक हुनुभयो अल्लि छिट्टै । एमालेलाई पनि रोग धेरैथरीको लागेको कुरा लुकेको छैन । तर, ऊ पनि ती बूढीआमाजस्तै रोगको दबाई खान मानिरहेको छैन । खान नहुने कुरा मात्र खाइरहेको छ । रोग कानमा, आँखामा र टाउकोमा छ तर ऊ नाइटोतिर मल्हम लगाउँदै छ । यो विवादमा धेरै मान्छे धेरै हिसाबले जिम्मेवार छन् । त्यसकारण कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन । निलम्बनको त झन् जरुरी नै थिएन । हाँँगा र पात भएको रूख मात्रै राम्रो देखिन्छ भन्छन्, त्यही भएर किसानले सकेसम्म रूखको हाँँगा काट्दैनन् ।
माधव, सुरेन्द्र, वामदेव, झलनाथ, घनश्यामहरू नभएको एमाले हाँँगा काटेको धोद्रो रूखजस्तै हो उजाड र कुरूप । घाँस नहुने, दाउरा पनि नहुने ठुुटो रूखको के महŒव हुुुुन्छ र ? शक्ति के हो भनेर चिन्न ३ कक्षामा पढ्दा प्राक्टिकल गर्न लगाएर बताउनुभएको थियो गुरुले । गुरुले अम्लिसोको कुचो ल्याउनुभयो कक्षामा र मसिना हाँगा त्यसबाट दुइटा निकाल्नुभयो । ल यसलाई भाँच भनेर दिनुभयो । सबैले पटापट भाँच्यौं । त्यसपछि फेरि सिंगो कुचो दिनुभयो र त्यसलाई पनि भाँच्न भन्नुभयो । त्यत्रो मोटो कुचो भाँच्ने कसको तागत, भाँचिएन । बुझ्यौ त शक्ति भनेको के रहेछ ? मान्छेलाई निकालेर, बाहिर पठाएर शक्तिशाली भएको दाबी गर्नु शक्ति के हो नबुझेको हो । जुट्दा, एकताबद्ध हुँदा मात्रै शक्तिशाली बनिन्छ । यो सामान्य कुरा पनि नबुझ्ने वा बुझ्न नचाहने भनेको त अशिक्षित नै हुनु हो, विचारहीन नै हुनु हो । यस्तो अवस्थाबाट ननिस्केसम्म अशिक्षित र विचारहीन भएको बात त लागिरहन्छ । आगे आफ्नै मर्जी, धन्यवाद !
Tags : अख्तियार निर्वाचन आयोग विण्ड फल समृद्ध नेपाल
आदर्श उदाहरणको अपारदर्शी व्यापार
डेढ दशकभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व गरेकी जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केललाई
एउटा हँसाउने सिरियलको एक एपिसोडमा डोको बोकेकी गृहिणीले यो गीत
सौगात रावतको नाममा रहेको जग्गा उनलाई पत्तै नदिएर अर्काको नाममा
शिलान्यास हुनासाथ तयार हुन्छ र अस्पताल ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बेड छैन